बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु यात्रुबाहक कारहरु वा सवारीहरु उचाल्ने सम्बन्धि - SPACCER
बारमबार सोधिने प्रश्नहरु (एफएक्वी) (current)
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु (एफएक्वी)
म कसरी बाँकी वसन्त यात्रा निर्धारण गर्ने?
TÜV परीक्षण रिपोर्टका अनुसार कम्प्रेसन र रिबाउन्ड बीच वसन्त यात्रा कम्तिमा4सेमी हुनुपर्दछ। एक नियमको रूपमा, सवारी १ वटा SPACCERs हरेक पा the्को स्थापनाको लागि मानकको रूपमा पर्याप्त बाँकी वसन्त यात्रा छ। चक्रको केन्द्रलाई चिपचाउने टेपको साथ चिन्ह लगाउनुहोस् र फेन्डरको छेउमा ठाडो रूपमा नाप्नुहोस्। पा wheel्को चिन्हित केन्द्र र फ्यान्डरको केन्द्र बिचमा दूरी मापन गर्नुहोस् र मानको नोट बनाउनुहोस्। ज्याक वा लिफ्टिंग प्लेटफर्मको साथ शरीर उठाउनुहोस्। अब गाडी रिवाउन्ड भएको छ र पाels्ग्राहरू जमीनको सम्पर्कमा छैनन्। अब पा wheel्को केन्द्र र फ्यान्डरको बीचमा दूरी नाप्नुहोस्। स्थापना गर्नका लागि SPACCER® को कुल उचाई निर्धारित गर्नुहोस् (१२mm / SPACCER®, १mmmm / SPACCER® रबर प्रोफाइलको साथ) र बाँकी वसन्त यात्रा गणना सूत्र प्रयोग गरेर: दूरी विस्तारित - दूरी कम्प्रेस - उचाई SPACCER information अधिक जानकारी
डेलिभरी समय कति हो?
प्रत्येक SPACCER तपाईको गाडीको चेसिस नम्बरको आधारमा व्यक्तिगत रूपमा निर्मित हुन्छ र त्यसैले सामान्यतया delivery-१० कार्य दिनहरू बीचमा डेलिभरी हुन्छ।
कुन निर्माता र मोडेलहरूका लागि SPACCER उपयुक्त छ?
SPACCER प्रणाली अनुकूलन-निर्मित हो र सबै निर्माताहरू र श्रृंखलाहरूको सवारीहरूमा फिट हुन्छ।
किन SPACCERs लाई १२mm, २mmmm, mm 36mm र mm 48mm को मॉड्युलर प्रणालीका रूपमा प्रस्ताव गरीएको छ र एउटा खण्डबाट बनाइएको छैन?
व्यक्तिगत स्प्याकरसँग वसन्त अन्त्य र वसन्त प्लेटमा असमानतालाई अनुकूलन गर्न लोच हुन्छ, जुन ठूलो एकल ब्लक गर्न सक्षम हुँदैन।
किन SPACCER ड्राइविंग व्यवहार सुधार गर्दछ?
यदि तपाईं मोटर मोटर बढाउनुहुन्छ, त्यहाँ कम से कम cm सेमी बाँकी वसन्त यात्रा हुनु पर्छ। सबै सवारी साधनको साथ, क्याम्बर, ट्र्याक वा एक्सेल ज्यामिति सामान्यतया कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। किन? किनभने लिफ्ट TÜV दिशानिर्देशनहरू द्वारा अनुमोदन सहिष्णुता भित्र गरिन्छ। प्रत्येक चोटि नयाँ प्रकारको सवारी अनुमोदन भएको छ, निर्माणकर्ताले प्रमाणित गर्नै पर्दछ कि गाडी लगभग cm सेन्टीमिटरले कम र माथि उठाउन सकिन्छ। यसका लागि कानुनी प्रावधानहरू छन् जुन प्रत्येक निर्माताले पालन गर्नुपर्दछ! यसको मतलब प्रत्येक निर्माताले कार डिलिभरीको लागि मध्यम अवशिष्ट वसन्त यात्रा स्थितिमा बिक्री गर्दछ। अब धेरैलाई शंका छ कि उच्च निलम्बनले ड्राइभिंग ब्यबहार स्पन्जी बनाउँदछ वा कार सजिलैसँग चल्न सक्छ। यद्यपि यो केस होइन। यसलाई बढाएर, कार सीमा क्षेत्रमा बढी स्थिर छ। किन? किनभने झटका अवशोषक लिफ्टको कारण कम वसन्त यात्रामा छ। लिफ्टको अगाडि एउटा कार, उदाहरणका लागि, अधिकतम १० सेन्टिमिटरको डाउनस्ट्रोक छ। Cm सेमी लिफ्ट पछि, यो केवल cm सेमी हो। कारले यसैले केवल cm सेमी रिवाउन्ड गर्न सक्दछ जब एक वागिंग कोर्स चलाउँदा र यसैले cm सेन्टीमिटर कम रोल हुन्छ। सामान्य ड्राइभिंगको समयमा, तथापि, तपाईले यी मध्ये कुनै पनि थाहा पाउनु हुने छैन, जब गाडी सँधै susp--5 सेन्टीमिटर नियमित निलंबनको यात्रामा काम गर्दछ। सीमा मा, उदाहरण को लागी जब यो अचानक आकस्मिक चालाकी को लागी आउँछ, तपाईं याद गर्नुहुनेछ कि कार अब हातमा साँच्चै सुरक्षित छ र मानक अवस्थामा जस्तो छिटो बाहिर ब्रेक छैन।
मेरो गाडीले लिफ्टको देखभाल कसरी गर्दछ?
लिफ्ट अनुकरण गर्न चाँडो र सजिलो तरीका मूल सack्केतको छेउछाउको अनुरूप गाडीलाई इच्छित उचाइमा बढाउनु हो।
के स्प्याकरले चक्र निलम्बनमा ध्वनि विकास गर्दछ वा आवाज विकास गर्दछ?
स्प्याकरले हल्लाको विकासलाई कम पार्छ। प्रयोग गरिएको विशेष एल्युमिनियम र प्याटेन्टेड आकारलाई धन्यवाद, यसले वसन्त अन्त्य र वसन्त प्लेटको बीचमा बफर जस्तो काम गर्दछ। यस प्रभावलाई SPACCER का लागि वैकल्पिक रूपमा उपलब्ध, लगाउन-मुक्त रबर प्रोफाइलहरू द्वारा थप सुदृढ पार्न सकिन्छ।
म मेरो गाडी कती मि.मी. बढाउन सक्छु?
तपाईं आफ्नो गाडी अधिकतम mm 48mm बाट बढाउन सक्नुहुन्छ। प्रत्येक SPACCER १२ मि.मी. उच्च छ र T toV प्रमाणपत्रका अनुसार तपाई एक अर्काको माथि ER SPACCER राख्न सक्नुहुन्छ।
एक अर्काको माथि म कति वटा स्प्याकर राख्न सक्छु?
सिद्धान्त मा, तपाईं एक अर्को मा माथि चाहानु हुन्छ धेरै SPACCER राख्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, एक अर्काको शीर्षमा केवल अधिकतम4SPACCER TÜV- अनुमोदित हो।
म कहाँ SPACCER खरीद गर्न सक्छु?
तपाइँ या त तपाइँको विशेषज्ञ कार्यशाला मा, अनलाइन, टेलिफोन वा फ्याक्स मार्फत SPACCER आदेश दिन सक्नुहुन्छ।
कसले SPACCER लिफ्ट पूरा गर्न सक्दछ?
स्प्यासर लिफ्ट किट कुनै पनि विशेषज्ञ वर्कशपबाट गर्न सकिन्छ। साधारण सभा को कारण, महत्वाकांक्षी शौकिया screwdrivers द्वारा स्थापना पनि सम्भव छ। माउन्टिंग निर्देशनहरू प्रत्येक अर्डरको साथ बन्द छ।
कुन सामग्री SPACCER बाट बनेको छ?
SPACCER एक विशेष एल्युमिनियम मिश्र बाट प्रत्येक गाडी को लागी अलग गरीएको छ।
के SPACCER लगाउन सक्छ?
Kraftfahrtechnisches Prüf-und Ingenieurzentrum Fakt GmbH द्वारा गरिएको एक परीक्षणले देखायो कि damage००,००० किलोमिटर भन्दा अधिक भार परिवर्तन गर्दा कुनै क्षति वा विकृति मापन गर्न सकिदैन।
कुन स्थितिमा SPACCER स्थापित छ?
SPACCER वसन्तको माथि वा तल स्थापना गर्न सकिन्छ। इलस्ट्रेटेड स्थापना निर्देशनहरू तपाईंको खरीदको साथ समावेश छन्, जसमा सिफारिस गरिएको स्थिति इंगित गरिएको छ।
के वसन्त सँधै SPACCER विधानसभाको लागि हटाउनु पर्छ?
यदि तपाईं सँग वसन्त कम्प्रेसरको उपयोग गर्न वसन्तलाई कम्प्रेस गर्न को लागी विकल्प छ, जब यो स्थापना हुन्छ, आघात अवशोषकलाई SPACCER असेंब्लीका लागि हटाउनु पर्दैन। जे भए पनि, भत्काउँदा सभा सजिलो हुन्छ र त्यसैले सिफारिस गरिन्छ।
के मेरो गाडीको निलम्बन सुविधा स्थापना पछि परिवर्तन हुनेछ?
होईन, किनभने अन्य प्रणालीहरूको विपरित, SPACCER ले मूल निलम्बन कायम राख्छ। यसले आरामको मामलामा कुनै परिवर्तन गर्दैन र प्रणालीलाई इलेक्ट्रोनिक चेसिसको साथ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के म फेरि पनि SPACCER विस्तार गर्न सक्दछु?
यदि तपाईं SPACCER फेरि विस्तार गर्न चाहानुहुन्छ, उदाहरणका लागि सवारी साधन बेच्न, यो कुनै प्रतिबन्ध बिना सम्भव छ। कुनै मूल अंश हटाउन वा स्थापना को लागी परिवर्तन गर्न को लागी, विघटन कुनै पनि समय मा सम्भव छ।
कसरी SPACCER संलग्न छ?
यसको प्याटेन्टेड प्रोफाइलको साथ, SPACCER ले थप फास्टनरहरू बिना वसन्तलाई सुरक्षित रूपमा सुरक्षित गर्दछ। यसले स्लिप हुनबाट बचाउँछ। SPACCER मा अन्त्य टोपीले वसन्तलाई यसको मूल स्थितिमा राख्छ।
स्थापनाले कति समय लिन सक्दछ?
स्थापना समय सवारीको मोडेल र स्ट्रटको प्रकारमा निर्भर गर्दछ। वसन्त परिवर्तनको लागि सम्बन्धित निर्माताको गाईड समय एक गाईडको रूपमा कार्य गर्दछ। यो सामान्यतया प्रति बाइक -०-60० + मिनेटको बीचमा हुन्छ।